Sucuudiga: Diyaarad lagu soo riday xaafadda qasriyada boqortooyada - BBC News Somali
Sucuudiga: Diyaarad lagu soo riday xaafadda qasriyada boqortooyada
22 Abriil 2018
Wakaaladda wararka Sucuudiga oo soo xigatay af-hayeenka booliska Riyaad ayaa sheegtay in uu yidhi "abaaro todobadii fiidnimo habeenkii Sabtida ayaa ciidanka nabad gelyadu ee xaafadda Al-Khisaami ee magaalada Riyaad waxay ka war heleen diyaarad yar oon duuliye lahayn oo ah nooca madadaalada loo kiciyo."
Af-hayeenku waxa uu intaa ku daray in ciidanka nabadgeladu qaadeen "talaabadii haboonayd ee amrka lagu siiyey" taas oo ahayd in ay soo ridaan diyaaraddaa yar.
Hadalkan af-hayeenku wuxu soo baxay iyadoo baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka lagu faafiyey warar aan la hubin oo ahaa in tacshiirad ba'an oo la is dhaafsanayaa ka socoto goobtaa ay ku yaallaan qasriyada boqortooyadu.
Waxaana markii dambe wasaaradda arimaha gudaha Sucuudigu sheegtay in ninkaa ilaalada laayey oo isna ay dileen ilaaladii kale ee qasrigaasi, ahaa muwaadin u dhashay Sucuudiga oo da'adiisu ahayd 28 jir.
Falanqayn: Taliska ciidanka Sucuudiga ee la bedelay
Sucuudiga oo shaneemooyin laga furayo